amapaki Amanzi kanye amachibi okubhukuda asendlini athandwa kakhulu phakathi kwabantu abahlala ezindaweni ezibandayo wezwe lethu. Yini enye engcono kunalokhu phakathi ezinzima Russian ikhefu busika ngempelasonto ngesikhathi bhukuda ehlobo elifudumele elisuka enhliziyweni, ride kumaslayidi amanzi kulungele e-sauna. Ingabe ikhona epaki amanzi e Petropavlovsk? Impendulo enemininingwane yalo mbuzo ngqo kubafundi bethu kulesi sihloko.
"Neptune" - ukuzilibazisa isikhungo kanye nezempilo
Ekwindla ka-2012 emzini Petropavlovsk wavula isikhungo sokuqala imisebenzi amanzi nokuzijabulisa ahlobene namasevisi zokungcebeleka. insimu yalo izipesheli ayatholakala unyaka wonke amachibi (kuhlanganise Jacuzzi), ezikhangayo izingane kanye nabantu abadala, kanye okugeza kanye sauna. Ngu design, lokhu eziyinkimbinkimbi kuzosiza ukuthuthukisa indlela yokuphila enempilo futhi usize ehlukahlukene izakhamuzi ezokungcebeleka kanye nezivakashi. Aquapark e Petropavlovsk yakhelwe indawo yokuhlala ntofontofo ezinkulungwane zezivakashi ngehora.
Ezokuzijabulisa epaki amanzi kanye nezinsizakalo ahlobene
Abantu abaningi babe amanzi yokuzijabulisa eziyinkimbinkimbi ukugibela ugibele. Waterpark "Neptune" e Petropavlovsk amanzi amaslayidi ziyojabula izivakashi, eyenziwe White Water. Phakathi kwabo 4 ezikhangayo abadala nentsha kanye 3 - izingane. Futhi epaki amanzi has 10 Hydro izitshalo kanye 4 vanny- "Jacuzzi". It inikezwa izivakashi futhi yokuthamela ku ukukhetha: Hammam, okugeza Russian noma sauna. Aquapark e Petropavlovsk - lena isikhungo yangempela yokuphila enempilo. Esikhathini eziyinkimbinkimbi "Neptun", ungavakashela ejimini, ukuqina isikhungo, izinqubo spa-pass futhi ukusizakala lezinhlelo bezokwelapha ehhovisi. Ngaphezu kwalokho, akvaklub inikeza iqembu amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela amakilasi, ukubhukuda izifundo nezinye izinhlelo zokuzithokozisa ezinganeni nakubantu abadala. Kukhona eziyinkimbinkimbi kanye amathilomu zayo, lapho unga isidlo okusheshayo noma dinner egcwele.
Aquapark e Petropavlovsk: isithombe isethi amanani
Inxanxathela "Neptune" itholakala emzini Petropavlovsk, emgwaqweni Medvedev Ukwakha 41. epaki amanzi ivuliwe nsuku zonke kusukela 8.00 ukuze 23,00. ithikithi Standard kukunika ithuba ukuchitha eziyinkimbinkimbi amahora ama-2. Inani layo ngempelasonto kuyinto 2500 Tenge abadala futhi 2000 Tenge izingane. Phakathi nezinsuku, intengo ngokuvakashela epaki amanzi kuyinto ephansi kakhulu. Kukhona izaphulelo iyatholakala kumakhasimende ngosuku lokuzalwa, futhi uma babefisa, ngaphakathi eziyinkimbinkimbi, ungakwazi ezigubha leli holidi. Waterpark "Neptune" e Petropavlovsk begodu nokobana izinhlelo yesihle. Ngezikhathi ihlelwe kwechibi ezikhangayo izingane emakhaya ezintandane izikole boarding, kanye nezingane livela emindenini ehlwempu. ukunakwa okuningi ikhokhelwa nezimiso inhlanzeko nokuphepha eziyinkimbinkimbi. Nalapha ngehora lesithathu senziwa filtration ephelele kanye ukuhlanzwa yamanzi okubhukuda. Lesi siqiwu amanzi njalo wababhukudi. "Neptune" - liyindawo enkulu kuze kube iholidi ngaphambi umndeni. Aquapark e Petropavlovsk kuthandwa kakhulu phakathi izakhamuzi nezivakashi. Woza lapha ukuhlola kokufaneleka salo muntu eziyinkimbinkimbi.
Ukuganukeja Chelyabinsk region - Lake Arakul
Reddening ngokuzumayo imbilapho kwabesilisa - loku kusho kutsini?